Lendvodza njengomuntu yezenhlalakahle ezaziwayo. ukuthuthukiswa Normal and umsebenzi kuyo yonke imiphakathi, akakwazi. Ukuba umphakathi njalo ukhiqiza izibopho entsha yokuqonda umphakathi, khona lapho ngezinye izikhathi uphoqa ukuba athambise isandla, ukunikeza usizo, njll Izinkinga ziyoba khona lapho siqala ukuba zitshele kusukela iqhaza okuqhubekayo kule imisebenzi ehlukahlukene, ukuphathwa ingxabano, imali izimpahla zayo ezingokoqobo futhi ngokomzwelo. Kukhona isigaba sabantu abangakwazi lokwenqaba, kungakhathaliseki umsebenzi wabo siqu, isithakazelo impumelelo ibhizinisi ngisho degree of nokusondelana umuntu okwakuphume kuye isicelo kuyinto yinto ehlukile. Kanjani ukuze ufunde ukuthi "cha", uma izwi okungukuthi siyisinqumo esinzima kunazo zonke?
Ngeshwa, iningi labantu, ngoba siqaphela ukuthi umuntu angacelwa konke ofuna, futhi akakwazi yokwenqatshwa kwesicelo yanoma yiluphi uhlobo, sebeqala ukusebenzisa lolu "spinelessness". Basuke lokusola ke zonke izindaba zabo, share sengonyama zezinkinga, ukuboleka imali. Lokhu kungenxa yokuthi isintu njalo ngifuna indlela elula ukuthuthukiswa self nokuxazulula izinkinga. Uma okukhipha - ngisho ubuso umuntu othize - ungubani, akekho ubona umqondo ukubheka ukuzama. Isisulu (ie, lowo kulokhu uhlushwa ukwethembeka) uyaqhubeka ukuzibandakanya emsebenzini emphakathini ewusizo. Kanjani ukuze ufunde ukuthi "akekho"? Ngokuvamile, lokhu kudinga umsebenzi eside uqobo. "Failsafe" abakwazi ukusho izwi ngokuyinhloko ngenxa ngabo kuyindlela ukuzizwa ukubaluleka nokuphumelela kwaleso isidingo.
Kanjani ukuze ufunde ukuthi "akekho"? Ukuphika akukwenzi ube abandayo futhi umuntu ngabandayo. Nangemva kokuba ezamile wahluleka kanye senqaba ngokuqinile fike sebenzisa uthembele usizo lwakho, uzothola esizwakalayo sokuziqhenya kwabo. Kubalulekile ukuhlukanisa izenzakalo ezibaluleke ngempela, ngaphandle ukubandakanyeka kwakho ngalolo empeleni ungakwazi umuntu ahluleka kuyo, futhi imisebenzi yasendlini kahle ixazululwe ngabanye.
Labo abathanda sina e umbuzo kanjani ukufunda ukuthi "cha", udinga ukuba uzijwayeze ezinye izincomo. Okokuqala, kufanele kuqondwe ukuthi isevisi imigomo yomunye Kuhlukanisa owakho. Isikhathi uzoqhubeka ehamba, futhi - ukusebenza ukuze kuzuze abanye, akhohlwe amaphupho abo kanye nezifiso. Kwabaningi kuba isisusa esikhulu ukuze ufunde ukuthi ukusabalalisa imisebenzi ngokuvumelana isithakazelo somuntu siqu ukusebenza kwabo. Okwesibili, ukwehluleka ukuthola ukwahluleka khona izakhiwo zakho, ukwesaba ukuba yedwa, ka inyumbazana. Abangane beqiniso ngeke bavume ukushiya umuntu wabo othandekayo futhi obakhonzile kuphela ngenxa yokuthi akazange ukulahla konke ukuthatha yomunye.
Zama ukwenza lokhu: Cela abangani bakho isikhathi axhumane nawe izicelo ezincane, senqabe akhiphe ukuthi kuyoba lula kakhulu. Zama futhi bazijabulele sifeza noma isiphi onzima wedwa. Uma usuqedile, ngeke ngaziqhenya ngokwakho. Ngakho, ukubaluleka akho emehlweni abo zikhule. Funda uthi "cha" can ubani uyakwazisa yena kakhulu.
Kuthiwani uma lamasu angenhla kungasizi? Kanjani ukuze ufunde ukuthi "akekho" uma banomuzwa nokwesaba wedwa futhi ukulahlekelwa abangane? Kulokhu, kunengqondo ukuba nenkulumo sina nabo. Sitshele inkinga, ngena ngemvume ke, ungathuli ngakho. Vumela abantu abasondelene nawe uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuba senqabe enze noma yimuphi, ngisho imisebenzi yabadobi. Ngenxa yosizo lwabo, wena nakanjani ukubhekana nale nkinga.
Mangisho ukuthi uCatherine II, naye akazange ukwazi indlela uthi "cha", sebusakazekele ukuxazulula le nkinga. Lapho yena ucelwe, yena nje yazuza umthamo wamanzi futhi imizuzu ke ezimbalwa uhamba esigodlweni. Indlovukazi wazindla ngokucophelela isinqumo sakhe, yazuza amandla okwenqaba. Ngemva kokuba ngamathe amanzi, ngokuvamile umoya ofanayo, wathi: "Cha!".
Thatha nesimo mkhandlu kusukela Queen bese uyazama.
Indlela ukuxhumana nomuntu? Indlela ukuxhumana indoda futhi ilungelo indoda?
Inkulumo ubuchwepheshe - ubuciko ethi enhle. Kanjani ukuze ufunde ukuba nekhono lokukhuluma kahle?
Inkulumo Kuncono - kuqubuka indoda ethile efundile futhi cultured
Kanjani ukuba banqobe ukwesaba sasobala
Uchungechunge oluthi "Idolobha injongo ekhethekile": abalingisi, izindima icebo isifinyezo
Mount Fuji e Japan: umsuka, umlando, ukuphakama kwesiqongo sentaba. Izinhlobo Mount Fuji (isithombe)
Saline: yokusetshenziswa. Saline ngoba umjovo. Saline uma ukhwehlela
Ukuma entsha isampula Amaphoyisa: Izidingo
Yini upha umngane